Ungawulandela njani omnye umxholo kuTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 346
Ngokwemvelo, umntu akabalulekanga kwaye loo nto Yazi i-twitter. Ngubani oyile izixhobo ezininzi kulandela iimvakalelo zabantu kunye nomyolelo. Enye yazo kukuququzelela uMsebenzisi ukuze abone izihloko ezenziwa ngomnye umntu kwinethiwekhi ye-Twitter.
Ukusetyenziswa kweqonga le-Twitter I-iOS kunye ne-Android, Umsebenzisi kufuneka aye kwiphepha leProfayili yakhe kwaye ucofe ngaphezulu ... ebekwe phezulu kwiphepha elikhankanyiweyo kwaye ucofe Jonga izihloko.
Kwenziwe, uMsebenzisi sele engenile Jonga izihloko Ungazibona zonke izihloko ezenziwa nguTwitter wakho. Kwakhona, uMsebenzisi uyakholiswa kukuchazwa okuninzi kangangokuba afike kwinethiwekhi yoluntu iTwitter angaze afune ukuyishiya.
Ukulandelelana kwexesha lokuQala kwe-Twitter
La Ixesha le-Twitter Ibhekisa kwinkcazo yoluhlu lwezinto, ezilungiselelwe ngenjongo yokutsala umdla waBasebenzisi bayo kunye nokuququzelela ukuhamba kwabo ngaphakathi kwale nkqubo.
Xa ufaka iphepha lakho leProfayili, into yokuqala kuwe ngeso lengqondo Umsebenzisi lixesha lakho lokuqala, apho uya kufumana ikhonkco leeTweets onokuzifunda kwaye uqhubele phambili kwiiTweets ezitsala umdla wakho.
Kwakhona, uMsebenzisi ufunyanwa kunye nezinye iziqulatho kuChronology, ezinje nge: Ukukhuthaza Tweets kunye neeRetweets. Kwi-Twitter, uMsebenzisi unoluhlu lweendidi kwiChronology yakhe ukonwabela ixesha elifanelekileyo.
AMANYE AMAXESHA KWITWITTER
Iqonga le-Twitter libonelela uMsebenzisi a isixhobo esibonakalayo eyenza kube lula kuwe ukuba ujonge amanye amaxesha. Kucacisiwe ukuba iindidi ezininzi zeChronologies zibandakanyiwe kwiziphumo zokukhangela okanye kwizintlu ebezilungiselelwe ngaphambili nguMsebenzisi.
Ngale ndlela, uMsebenzisi xa esenza uphando uya kujonga Umda weeTweets, Amaxesha kunye neziganeko eziya kuthi zihambelane nemigaqo yento obuyifumana kwiqonga le-Twitter.
Ngokukwanjalo, xa uMsebenzisi ecofa kwimenyu, uya kujonga uthotho lweeTweets ezithile ezipapashwe ziiakhawunti ezahlukeneyo ze-Twitter. Ngale ndlela, uMsebenzisi unokukhetha bona amanye amaxesha kwinethiwekhi yoluntu iTwitter.
Kwi-Twitter uMsebenzisi unokubona iiTweets eziHlangayo kunye nezeMva nje
Inethiwekhi yokuncokola iTwitter inokukhetha evumela uMsebenzisi ukuba azikhuhle ngegxalaba Tweets Kubonisiwe kunye neeTweets zakutshanje. Ngale ndlela unokuzijonga zombini iiTweets ngaphakathi kwexesha olithelekelelayo.
Ngesi sizathu, uMsebenzisi ufuna indawo kwi Imenyu ephezulu Cofa kwi icon eneenkwenkwezi eneempawu ezimbini zokongeza kwicala lasekhohlo, enye ingaphezulu enye isezantsi kwenkwenkwezi.
Emva koko, uMsebenzisi ucofa kwifayile ye- iintolo ukutshintsha i-Timeline okhetha ukuyijonga. Emva koko cofa Jonga umxholo okhethiweyo ukuya kuseto. Umsebenzisi sele efundile ukuba angatshintsha njani ukuze ajonge iiTweets eziPhakathi kunye nezeMva nje.
1 Ukulandelelana kwexesha lokuQala kwe-Twitter
2 AMANYE AMAXESHA KWITWITTER
3 Kwi-Twitter uMsebenzisi unokubona iiTweets eziHlangayo kunye nezeMva nje
Iilebheli kuFacebook zingenziwa njani?